I-Polymer powder mveliso - i-China i-polymer powder abavelisi, abaxhasi
I-RDP VE3011 ye-formaldehyde-yasimahla ngakumbi ukuhonjiswa kodonga lwangaphakathi lodonga
I-ADHES® VE3011 yinto engenakutshintshwa re-Umgubo wePolymer osasazekayo ngokusekwe kwi-vinyl acetate-ethylene copolymer, ngakumbi efanelekileyo kudaka lwe-diatom izinto zokuhombisa kwaye self-sokulinganisa udaka umgangatho. I-ADHES® VE3011re-Umgubo wePolymer osasazekayo yi I-formaldehyde-free, ukukhutshwa okuphantsi imveliso. Ingasetyenziselwa ukwenza iimveliso ezihlangabezana neemfuno zeUmgangatho waseYurophu I-EMICODE EC1PLUS.
Ngexesha lokusebenza kolwakhiwo, i-ADHES® VE3011 iphinda isasazeke ipowder yomphunga inokubonelela nge-rheology kunye nokusebenza, ngokubonakalayo kuphucula ukuhamba kunye nokulinganisa, ukunciphisa imfuno yamanzi. Xa inqanaba lokuqina, udaka kunye ne-VE3011 iphinda isasazeke umgubo wepolymer uya kuba nembonakalo elungileyo yokugqibela kunye nokuthamba, amandla aphezulu okugqibela kunye nokudibana okuphezulu, ukwandisa ubhetyebhetye, ukuphucula uzinzo lomjikelo womkhenkce, ukunyusa ukunganyangeki kunye nokunyanzelwa kwempembelelo.
I-ADHES® AP2160 yi Umgubo wepolymer ocacileyo (I-RDP) isekwe kwi-ethylene-vinyl acetate copolymer. Ifanelekile isamente, ikalika kunye ne-gypsum esekwe kancinaneUmxube wokudibanisa owomileyo.
Ngexesha lokusebenza, Umgubo wepolymer ocacileyo I-AP2160 inokusasazeka okuhle, inokuphucula ukusebenza kunye nepropathi ye-rheological yodaka, yandise ixesha lokuvula.
Ngexesha lokuqaqanjiswa ngokwezigaba, kubonelela ngodaka olugqwesileyo amandla okudibanisa, Ukuphucula amandla okumelana nokunxiba, ukwandisa ukubumbana kunye amandla.
IADHES ® AP2080 Ukusasazeka kwakhona kwePolymer Powder (I-RDPeyeyomgubo wepolymer ophulwe yi-ethylene-vinyl acetate copolymer. Le mveliso iye adhesion elungileyo, plasticity, ukumelana amanzi kunye namandla deformation.
Ukusasazeka kwakhona kwePolymer Powder (I-RDPUnobhetyebhetye obugqwesileyo, iplastikhi eyomeleleyo kunye neepropathi zokumelana ne-abrasion kunye nokukwazi ukuguqula amandla ukuze kunyuswe amandla okuncamathela phakathi komdaka kunye nenkxaso eqhelekileyo kunye nokuphucula ukusebenza komdaka. Kwipolymerudaka lwesamente, inokunyusa izixhobo zokulwa nokugoba kunye neepropathi ezichasayo. Ke ngoko, ibalaseleukusebenza anti-ukuqhekeka, ezinokuthintela izixhobo ekuqhekekeni ngokufanelekileyo.
I-Styrene-Acrylate Copolymer Isasazeka kwakhona iPolymer Powder AX1700
I-ADHES® AX1700 yi re-Umgubo wePolymer osasazekayo ngenxa ye I-styrene-acrylate copolymer. Ngenxa yobuninzi bezinto zayo ezingafunekiyo, amandla e-anti-saponification e-AX1700 omelele kakhulu. Ingasetyenziswa ngokubanzi kulungiso lweudaka oluxutywe owomileyo Izinto zezimbiwa zesamente ezinje ngesamente, ilayida yesilayidi kunye negypsum.
I-ADHES® AX1700 re-Umgubo wePolymer osasazekayo ukubonelela ngokusebenza kakuhle, ukusetyenziswa kwe-trowel elula kunye nokuhle ukusebenza bonding, kwaye unokunciphisa ukufunxwa kwamanzi, ukwandisa ukuguquguquka, ukubambelela okuhle kwimigca eyahlukeneyo yebhodi ye-polystyrene foam, ibhodi yoboya bezimbiwa. Zodaka kunye Umgubo weRD I-AX1700 iya kuba nokumelana nokunxiba okuhle, ephezulu amandla okudibanisa, kunye nomxholo wegesi ophantsi kumdaka.
I-Hydrophobic Re-dispersible Polymer Powder VE3311 izinto ezingangeni manzi
IADHES® VE3311 Ukusasazeka kwakhona kwePolymer Powder eyeyomgubo weepolymer ezifakwe i-ethylene-vinyl acetate yeCopolymer, ngenxa yokwaziswa kwe Isilicon alkyl izinto ngexesha lenkqubo yokuvelisa, i-VE3311 yomelele hydrophobic ukusebenza kunye nokusebenza kakuhle; yomelelehydrophobic ukusebenza kunye nokugqwesa tensile Strength; inokuphucula i-hydrophobicity kunye nokudibanisa amandla omdaka ngokufanelekileyo.
Ukusasazeka kwakhona kwePolymer Powder I-VE3311 yi-polymer binder kwaye ikwabonelela nge- hydrophobic isiphumo. Idityaniswe nezibophelelo ezingaphiliyo, umgubo uya kubonelela ngokusebenza kakuhle kakhulu; waphilisa udaka nge-VE3311 iphucule ukunamathela, bhetyebhetye, ukukhubazeka kunye nokuxhathisa kwe-abrasion.
Ngenxa yokwakheka komgubo okhethekileyo, udaka oluguqulwe nge-ADHES® VE3311 luya kuba nefuthe elihlala lihleli ukugxothwa kwamanzi.